IGreat Barrier Reef 'isesimweni esibulalayo' | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IGreat Barrier Reef isesimweni »esibulalayo»
Isithombe - EFE
IGreat Barrier Reef, indawo kuze kube muva nje ibe yinhle kakhulu njengoba ibiyikhaya lezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo, idlula esimeni esibucayi. Ngokusho kososayensi amakhulu amakhilomitha wamakhorali awatholakali.
Amakhorali we-Coral ngomunye wemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, futhi ikakhulukazi ngokukhuphuka kwezinga lokushisa kwezilwandle. Uma lokhu kuqhubeka, enye yezindawo i-Unesco eyamemezela njengeNdawo Yamagugu Omhlaba inganyamalala.
Isazi uJon Brodie sisho kumagazini wase-Australia we The Guardian que amakhorali asesimweni esibulalayo. Yize lokhu kungesona okokuqala ukuthi amakhorali ahlupheke kakhulu, bebehlala beneminyaka yokululama, njengoba kwenzeka muva nje. Ngeminyaka ka-1998 nango-2002 babe nesikhathi esibi, kepha kuze kube ngu-2016 abaphindanga bahlushwa ngumcimbi onje, umehluko wokuthi kusukela lapho abasenaso isikhathi sokubuyela esimeni sabo esijwayelekile.
»Kuthatha okungenani ishumi leminyaka ukuthi amakhorali akhula ngokushesha kakhulu alulame ngokuphelele, ngakho-ke imicimbi yokuqhamuka ngobuningi izinyanga ezi-12 zihlukanisiwe inikeza amathuba okuthola kabusha ama-reef ezalimala ngo-2016'Kuchaza uJames Kerry, isazi sezinto zasolwandle eJames Cook University (Australia).
Kuze kube manje, Amakhilomitha ayi-1500 amakhorali akhishwe ngegazi; ingxenye eseningizimu kuphela enempilo. Endaweni emaphakathi, kubhalwe inani lokufa kwabantu elingaba ngamaphesenti angama-50, kusho uTerry Hughes, umqondisi weCentre of Excellence for Coral Reef Study.
Ososayensi, imbangela yalokhu kuqubuka kwaba ukufudumala komhlaba. Eminyakeni eyi-19 eyedlule, ukwanda kwebanga elilodwa kudale imicimbi emine, kusho uHughes. Uma kungekho sinyathelo esithathwayo ukumisa, wonke amakhorali cishe azonyamalala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » IGreat Barrier Reef isesimweni »esibulalayo»
Ukuhamba ngendiza kuzoba nesiyaluyalu ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu